Copernicus ma ọ bụ Aristotle ọ na-azụ ahịa gị? | Martech Zone
Wednesday, December 30, 2009 Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Douglas Karr
E nwere ọtụtụ ulo oru m na-arụ ọrụ… na m na-eche ndị m ụtọ nke kacha bụ ndị na-aghọta na ha na-adịghị mkpa dị ka ndị ahịa ha na-. Offọdụ n'ime ndị ọzọ anaghịdị ekweta na enwere onye ahịa.
Achọpụtala Copernicus dị ka nna nke mbara igwe nke oge a ebe ọ rụrụ ụka na heliocentrism gbasara ala. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, anyanwụ bụ etiti nke mbara ụwa anyị, ọ bụghị ụwa. Ọ bụ nkwulu na ọ na-emegide ọdịbendị nke ndị ọkà mmụta metụtara okpukpe n'oge ahụ. Ma ọ bụ eziokwu.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ idozi ihe omimi nke ụwa dum na azụmahịa gị, ị nwere ike ịjụ onwe gị ajụjụ mbụ gbasara etu azụmahịa gị si aga. Recognighara ịmata onye ahịa gị dị ka etiti azụmahịa gị yana nke dị mkpa karịa onye ọ bụla nọ na ya na-eduga ngbanwe ndị ọrụ, ntụgharị ndị ahịa, ma nwee ike ibute mbibi azụmahịa gị.
Results Kedu ka anyị si eme? Kedu ka ndị ahịa anyị si eme?
ojiji Ha na-eji ya eme ihe na-ezighi ezi. Kedụ ka anyị ga - esi kwado ya?
-eri Anyị kwesịrị ịgba ụgwọ ọzọ. Kedu uru nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị dịịrị ndị ahịa anyị?
Njide Gịnị mere i ji hapụ anyị? Anyị a na-eme ihe niile dị mkpa iji debe gị?
Partners Gịnị ka ha meere anyị? Kedu ihe anyị nwere ike ime iji hụ na ha nwere ọganiihu?
ọrụ Ha adighi mma. Ndị ọrụ anyị na-eme ka anyị nwee ọganiihu.
mmefu ego Nweta nnabata. A ga-aza gị ajụjụ.
Marketing More na-eduga. Mata atụmanya ndị anyị pụrụ inye aka n'ezie.
Nduzi Nduku Ndi usoro kaadị akwụmụgwọ ha? Ànyị ga-eme ka ha nwee ihe ịga nke ọma?
Mgbanwe ndị ọrụ Gịnị ka akwụkwọ nta ahụ kwuru? Kedụ ka anyị nwere ike isi kwalite ma melite nrụpụta ọrụ?
Strategy Anaghi aru oru… ozo Re-org! Ndi ndu anyi n’emezu atumatu 5 nke ha.
atụmatụ Ha depụtaghachiri anyị! Kedu ihe anyị na-arụ ọrụ na-esote?
Mmekọrịta ọhaneze Nweta uche. Nwee mmetụta na-ekpo ọkụ.
Njikọ mmekọrịta Nwee IT gbochie ihe niile! Gbaa ndi oru ume ka ha tinye aka!
Kedu ụdị ụlọ ọrụ ị bụ? N'ụbọchị ndị a nke mgbasa ozi mmekọrịta, ọ mara mma ịkọ. Ọ bụrụ na echiche gị gbasara mgbasa ozi na-ekwupụta ozi gị nye ndị ahịa gị, ikekwe Aristotle na-agba gị. Ọ bụrụ na ozi gị na-ekwupụta ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa gị, ị na-agba ọsọ site na Copernicus. O were ụwa otu puku afọ na narị asatọ + iji chọpụta ya… olile anya na ọ gaghị ewe azụmahịa gị ogologo oge.
Dee 30, 2009 na 7: 29 AM
Ntụle nkọ, Doug. N'ịga n'ihu atụnyere ahụ, Henry Ford malitere dị ka Copernicus wee bụrụ Aristotle ruo nwa oge, ma mesịa mee ka ọ laghachi n'eziokwu nke eluigwe na ala azụmaahịa Copernican. N'adịghị ka narị afọ nke 14, ndị na-eso ụzọ na-abụghị ndị ahịa na-azụ ahịa anaghị azụ ahịa & mma maka nkwenkwe ha. Ha na-ada ego ma ọ bụ gbaa ha akwụkwọ.